at 5:00 PM Labels: ရိုးရာအစားအစာ, အသုပ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ဥပုသ်နေ့လည်းဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မတို့အိမ်မှာ ဆွမ်းချိုင့်အတွက် ပြင်ဆင်ရတယ်၊ ဥပုသ်စောင့်မယ့်အမေ့လည်း စားလို့အဆင်ပြေအောင်၊ အကိုနဲ့မောင်လေးကလည်း ဆန်းဒေးပိတ်ရက်မို့ အိမ်လာမယ်ဆိုတော့ လူစုံတုန်းလေး မာလာဟင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါနော်။ အဲ့ဒါနဲ့ တစ်ဆက်တည်း မာလာဟင်းချက်နည်းမေးထားတဲ့ ကူးကူး၊ မြတ်လေးပန်းတို့နဲ့ မောင်နှမအားလုံးတို့အတွက် ကျွန်မ မာလာဟင်းလုပ်နည်းလေး မျှဝေပါရစေနော်။
မာလာဟင်းလို့ ဆိုပေမယ့် အသီးအရွက်တွေကို ရေနွေးဖျောပြီး မာလာဟင်းအနှစ်နဲ့သုပ်ရတာပါ။
လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ အမယ်များပေမယ့် ကိုယ်ဝယ်လို့လွယ်မယ်၊ ဈေးနှုန်းလည်း သက်သာတဲ့အမယ်မျိုးကိုသာ ရွေးဝယ်ပြီး ထည့်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်မ လိုအပ်တဲ့အမယ်တွေအားလုံးကိုတော့ ချရေးပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန်မထည့်လည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင် အရွက်အမယ်အစုံ ၀ယ်မရလို့ မထည့်ပါဘူး။ (ကျွန်မတို့မိသားစု ဒီနေ့လူစုံတော့ ၁၅ ယောက်ရှိတယ်။ အိမ်မှာ ၁၅ ယောက်စာ ချက်တယ်ဆိုပေမယ့် အခု လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ အတိအကျမပြောတော့ဘူး၊ အသီးအရွက်နဲ့ အခြားအခြောက်အခြမ်းကို စိတ်ကြိုက် လိုသလောက်ထည့်နိုင်ပါတယ်။ အနှစ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ ကျွန်မ ၅ ယောက်စာ ပြင်ဆင်တဲ့ နှုန်းနဲ့ ပြောပြပါမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နှစ်သက်ရင် နှစ်သက်သလို အဆာပလာ၊ အရသာ၊ အမွှေးနံ့သာတို့ကို ကဲပြီးထည့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အချိုမှုန့်မစားတဲ့သူအတွက်ဆိုရင် ခနောကြက်သားမှုန့်ကို ပြောင်းသုံးလို့ရပါတယ်)
ညက မောင်နှမတတွေ တီဗီကြည့်ကြ၊ စကားပြောကြ၊ မီးပူတိုက်ကြနဲ့ ကိုယ်စီအလုပ်လုပ်ကြရင်း အကိုက ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကို ဆွမ်းဟင်းချိုင့်ပို့ရမှာကို သတိရပြီး မနက်စောစောမှ ၀ဥခေါက်ဆွဲကို ရေစိမ်ရင် အနူးကြာမှာစိုးလို့ တပ်လှန့်ပါတယ်။ နင်တို့ခေါက်ဆွဲရေစိမ်ထားကြဦးနော်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီး ကျွန်မညီမ အလတ်မက ခေါက်ဆွဲကို ရေထစိမ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မနက်ကျရင် ရေစိမ်ရမယ့် အခြောက်အခြမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ကျောက်ပွင့်အဖြူ၊ ကြွက်နားရွက်မှို၊ ပန်းခြောက်၊ ပဲပြားခြောက်ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပဲပြားလိပ်တို့ကို မောင်နှမတတွေ တစ်ယောက်တစ်လက် ၀ိုင်းကူရင်း အဆင့်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။ အမေက အိပ်ရာဝင်ခါနီး ခေါက်ဆွဲကို ကြည့်လိုက်တော့ ခေါက်ဆွဲက တော်တော်မာသေးတာမို့ ဒီအတိုင်းပဲ ရေစိမ်ထားပြီး အိပ်ရာဝင်ကြလို့ မှာပြီး အမေအိပ်ရာဝင်သွားပါတယ်။ အမေလည်းအိပ်ရာဝင်သွားပြီဆိုပြီး မောင်နှမတွေ တီးတိုးတီးတိုးနဲ့ တွတ်ထိုးနေတာ အမေက အိပ်ရာထဲကနေ ကလေးတွေ မအိပ်ကြသေးဘူးလား၊ မအိပ်သေးရင်လည်း ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအားနာဦးတဲ့ သတိပေးတော့ မောင်နှမတွေ ဇက်ကလေးပုသွားပြီး အိပ်ရာဝင်ဖို့ အသီးသီးပြင်ကြပါတယ်။ မောင်လေးကတော့ မမကြီး မနက်ကျ နှိုးဦးတဲ့။
မနက်ကျတော့ အိပ်ယာနိုးနိုးချင်း ရင်တမမနဲ့ ခေါက်ဆွဲဇလုံကိုသွားကြည့်မိတယ်၊ တော်ပါသေးရဲ့ ခေါက်ဆွဲတွေ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး (ပျော့ပြဲတာတွေဖြစ်မသွားတာမို့ အသက်ရှူချောင်သွားပါတယ်)။ ပြီးတော့မှ မျက်နှာသစ်၊ သွားတိုက်ပြီး ခေါက်ဆွဲတွေကို ဆယ်ယူထားပြီး တခြားအခြောက်အခြမ်းတွေကို တစ်မျိုးစီကို ဇလုံတစ်လုံးစီမှာထည့်ပြီး ရေနဲ့တစ်ရည် ဆေးပြီးတော့ ရေနွေးကြက်သီးနွေးနဲ့ စိမ်ပါတယ်။ ပန်းခြောက်က အပွလွယ်တာမို့ ပန်းခြောက်ပွလာတာနဲ့ တပြိုင်နက် ရေထပ်ဆေး၊ ပန်းခြောက်ထဲက ၀တ်ဆံတိုင်တွေကို ဖယ်ရှားပြီးပြီး ပန်းခြောက်တွေကို ထုံးချည်လိုက်ပါတယ်။ ကြွက်နားရွက်မှိုခြောက်၊ ကျောက်ပွင့်တို့ကို တစ်ကိုက်စာအရွယ်တော်လေးတွေ ဖြစ်အောင် ညှပ်ထားပါတယ်။ ပဲပြားလိပ်နဲ့ ပဲပြားခြောက်ခေါက်ဆွဲကလည်း ရေစိမ်တာနဲ့ ပွလာတာမို့ ပြီးတာနဲ့ ရေသွန်ပြီး ပဲပြားခေါက်ဆွဲဖတ်လေးတွေကို ခြောက်လက်မအရှည်လောက်ရအောင် ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို တစ်ယောက်ကလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ညီမအငယ်မက မုန်ညင်း၊ ကန်စွန်း၊ ကိုက်လန်စတာတွေကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ သုံးလက်မအရွယ်လေးတွေဖြစ်အောင် ဖြတ်တောက်ပြီး ရေစိမ်ထားပေးပါတယ်။ မုန်လာဥနီနဲ့ အာလူးကို အခွံနွှာ၊ ရေဆေးပြီး အတွန့်လေးတွေရအောင် ကျောက်ကျောလှီးတဲ့ဓားလေးနဲ့ အရှည်လိုက်ရော အ၀ိုင်းလေးပါရအောင် လှီးပါတယ်။
အကိုကတော့ ကြက်သားတွေကို ရေစင်အောင်ဆေး၊ အရေခွံနွှာပြီး တောက်တောက်စင်းပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ထောင်းထားတဲ့ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူရယ်၊ ဆား၊ သကြား၊ အချိုမှုန့်တို့နဲ့ ရောနယ်ပြီး နှပ်ထားပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဥတွေကိုလည်း အခွံနွှာရေဆေးပြီး နုပ်နုပ်စင်းထားပါတယ်။ ပဲပြားကိုလေး သေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင် နုပ်နုပ်စင်းပြီးဆား၊ သကြားနဲ့ နယ်ပေးထားပါ။
မောင်လေးကတော့ မြေပဲကို ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပြီး ကြိတ်ပါတယ်။ နှမ်းကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ငရုတ်သီးအကြမ်းမှုန့်ကိုလည်း တစ်ခါကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုစီထဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
အားလုံးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မက အိုးခပ်ကြီးကြီးတစ်လုံးကို ယူ၊ ရေတစ်ဝက်လောက်ထည့်ပြီး မီးအားကောင်းကောင်းနဲ့ ရေနွေးတည်ဖို့ မီးဖိုပေါ်တင်ပါတယ်။ ရေနွေးပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါကျရင် ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို ထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေ ပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါ အပေါ်အောက် နှံ့အောင် မွှေ၊ အဖုံးအုပ်ပေးပြီး နောက်ထပ် ငါးမိနစ်လောက်ထပ်တည်ပေးပါ။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြီး ဆူလာတဲ့အခါ ခေါက်ဆွဲ အိ၊ မအိမြည်းကြည့်ပါ။ ခေါက်ဆွဲအိပြီဆိုရင်တော့ ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို ဆယ်ယူပြီး အဲ့ဒီကျန်တဲ့ ရေနွေးထဲမှာပဲ ကျောက်ပွင့်၊ မှိုခြောက်၊ ပန်းခြောက်၊ ပဲပြားလိပ်တို့ကို ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ခုနက ခေါက်ဆွဲဖတ်တွေကို ရေအေးနဲ့ဆေးပြီး စကာနဲ့ စစ်ပေးထားပါ။ ပြုတ်အိုးဆူရင်တော့ အထဲက အဖတ်တွေကို ဇကာနဲ့ ဆယ်ယူပြီး အအေးခံထားပေးပါ။
ဒုတိယအနေနဲ့ ဟင်းအနှစ်ပြင်ဆင်ပါ့မယ်။ မီးဖိုပေါ် ဒယ်အိုးတင်၊ ဆီထည့်၊ ဆီပူလာတဲ့အခါ နနွင်းမှုန့်လေး နည်းနည်းခပ်လိုက်ပြီးတော့ နုပ်နုပ်စင်းထားတဲ့ ကြက်သွန်နီကို အရင်ထည့်ပါတယ်။ ကြက်သွန်နွမ်းတာနဲ့ နုပ်နုပ်စင်းထားတဲ့ ကြက်သားတွေနဲ့ ပဲပြားတွေကိုထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပါတယ်။ ၃ မိနစ်လောက် ကြာရင် ကြိတ်ထားတဲ့ မြေပဲတွေကိုပါထည့်ပြီး အားလုံးသမအောင်မွှေပြီး ကြော်ပေးပါတယ်။ ဆီများတဲ့အတွက် ကြော်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျက်ခါနီးရင် မွှေရတာ ပိုပြီး သွက်လာသလို အရောင်ကလည်း တဖြည်းဖြည်းရွှေအိုရောင်ဘက်ကို ပြောင်းလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကြိတ်ထားတဲ့ ငရုတ်သီးမှုန့်တွေကိုပါ ထည့်ပြီး ကြော်ပေးပါ။ (တချို့က ငရုတ်သီးကို ဒီအချိန်မှ ထည့်ရင် ကျက်ပါ့မလား၊ အစောကြီးကတည်းက ဘာလို့မထည့်တာလဲလို့ မေးနိုင်ပါတယ်။ အစောကြီးကတည်းက ထည့်ရင် ငရုတ်သီးညှော်နံ့ပိုပြင်းသလို ငရုတ်သီးကျွမ်းသွားမှာလည်း စိုးရပါတယ်။ အခုနေမှ ထည့်လည်း ငရုတ်သီးက ကျက်ပါတယ်နော်။) ပြီးရင် မာလာဟင်းရယ်ဒီမိတ်အနှစ်ထုပ်ကိုထည့်ပြီး သမအောင်မွှေပေး၊ နောက်ဆုံးကတော့မှ နှမ်းကိုထည့်၊ အပေါ့အငံအတွက် ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်တို့ကို ထည့်ပေး၊ ပြီးတော့ရင် နှမ်းဆီမွှေးလေးအုပ်ပြီး မီးဖိုပေါ်ကနေ ဟင်းအနှစ်အိုး ချလို့ရပါပြီနော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ဆီရွှဲရွှဲ၊ အရောင်ရဲရဲ၊ အနံ့ကတော့ မွှေးကြိုင်နေပြီး စပ်စပ်ဆိမ့်ဆိမ့်လေး အရသာရှိတဲ့ ဟင်းအနှစ်ရပါပြီ။
ကော်မှုန့်ထမင်းစားဇွန်းတစ်ဇွန်းကို ရေလီတာဝက်ရယ်၊ ဆားလေး၊ အချိုမှုန့်လေးနည်းနည်းထည့်ပြီး ကျိုပေးထားပါ။ ကော်ရည်ခပ်ကျဲကျဲအတွက်ပေါ့နော်။ (တချို့ကတော့ မကြိုက်တတ်ပါဘူး။ မကြိုက်ရင် မထည့်ပါနဲ့နော်)
အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ ဟင်းနယ်ဖို့အတွက် ဇလုံကြီးကြီးတစ်လုံး (ကျွန်မတို့အိမ်မှာတော့ လူများလွန်းလို့ လင်ဗန်းကြီးထဲ ထည့်နယ်ရတယ် :P) ထဲကို အသီးအရွက်တွေရယ်၊ ခေါက်ဆွဲနဲ့ အခြား အဆာပလာတွေရယ်၊ ကော်ရည်လေးရယ်၊ ပြီးတော့ ဟင်းအနှစ်တွေထည့်ပြီး အားလုံးကို သမအောင် မွှေပါတယ်။ နယ်တဲ့အခါ ဟင်းရွက်တွေ ကြေမသွားရအောင် ညှပ်နဲ့နှံ့အောင်လုပ်ပေးပါနော်။ အရသာအပေါ့အငံကိုလည်း မြည်းပြီး လိုတဲ့အရသာကို ထပ်ဖြည့်ပါနော်။ အချဉ်အတွက်ကတော့ ကျွန်မက သံပုရာရည်ထည့်ပြီး တစ်ခါတည်း နယ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မကြိုက်ကြဘူးဆိုရင်တော့ မန်ကျည်းနှစ်အချဉ် ခပ်စပ်စပ်လေးနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်နော်။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ မာလာဟင်းရပါပြီနော်။ ဆွမ်းချိုင့်ထဲလည်းလှူလိုက်ရတယ်။ အမေလည်း ပျော်သလို ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေလည်း အရမ်းပျော်ပါတယ်။
ချက်နည်း ကွဲလွဲကောင်း ကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုအကြိုက် ချက်ထားတာမို့ ဆိုင်က ချက်နည်းနဲ့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမတွေအားလုံး အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်နော်။
Khin September 7, 2008 at 5:41 PM
မာလာဟင်းဆိုတာ ၇န်ကုနု်မှာကြားဘူးတယ်။ ၇ှမ်းတရုပ်ဆိုင် တခုမှာေ၇ာင်းတာကြားတယ်။ သိပ်မသိဘူး။ အခုမှ အသေအချာသိတယ်။ ကျေးဇူးဘဲ။
တရုတ်နာမည် 'မလ'ဆိုတဲ. ဟင်း ကို မြန်မာ မူပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မလ ကတော. တရုတ်လို စပ် ရှိန်းရှိန်းလို အဓိတ်ပယ် ရပါတယ်။ တရုတ်ပြည် စိချွမ်း ပြည်နယ် ရိုးရာ ဟင်းတခွတ်ဖြစ်ပြီး။ မန္တလေးမြို.တွင် လူကြိုက် များလာရာမှ။ ယခုအခါ ရန်ကုန်မြို.ထိ ပါ ကူးစက်ခဲ.ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
လုလု September 8, 2008 at 7:40 PM
စိုင်းရေ့့့  မလာလာဟင်းသမိုင်းကို ရှင်းပြလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
Khin September 10, 2008 at 8:36 AM
Anonymous October 10, 2009 at 2:06 PM
I can't continue reading when I hit more link. I really want to know how to cook Marlar curry.
Anonymous January 2, 2010 at 9:41 AM
Thanks Lu Lu for this Marlar hin recipe and also thank you very much Ko Sai Tun for the history of Marlarhin, I was always wondering how this name come from.
snow January 2, 2011 at 7:54 AM
I can't buy Marlar Hin paste(Ready made) in here. So, could you please tell me how to do .